iOS Photo Nyefee gaa na Import iOS Photos ka Computer
> Resource> iOS> Best iOS Photo Nyefee gaa na Import iOS Photos ka Computer
"M nwere ọtụtụ iOS ngwaọrụ, iPhone 4S, ọhụrụ iPad, na iPod aka 5. Bụ n'ebe ọ bụla ụzọ dị mfe iji mbubata foto site na iOS ngwaọrụ kọmputa? M nwere ọtụtụ nke foto na iOS ngwaọrụ na mkpa nyefee ha ka ha na kọmputa. "
Chọọ maka ụzọ dị mfe iji nyefee iOS photos na kọmputa? Amaghị m ihe ị na-enweta site na Google. N'ezie m na-agụ ụfọdụ results, ma ahụghị a na-eju afọ ngwọta. Ya mere, mgbe m na-eji Wondershare TunesGo, a ọkachamara iOS Photo Nyefee, m kpebiri na m nwere ike ikwu iji ndị ọ dị mkpa iji zọpụta foto na iOS na kọmputa. Na ya, naanị na 3 mfe nzọụkwụ, ọrụ ga nyefee iOS photos na kọmputa effortlessly. Gụọ ihe ndị na nzọụkwụ n'okpuru ịmụta otú ime ya.
Nzọụkwụ 1. Download TunesGo
Download Wondershare TunesGo na wụnye ya na kọmputa gị. Dị ka ị na-ahụ iche iche Wondershare TunesGo (Windows) na Wondershare TunesGo (Mac) dị ibudata. Dị nnọọ download nri version maka kọmputa gị.
Nzọụkwụ 2. Jikọọ ihe iOS ngwaọrụ na kọmputa
Jikọọ gị iOS ngwaọrụ na kọmputa site na iji eriri USB na na ẹkedori iOS Photo Nyefee. Nke a iOS ngwa ga-ahụ gị iOS ngwaọrụ na-egosipụta ya ke akpan window na faịlụ niile ota n'ime udi.
Cheta na: Wondershare TunesGo ugbu a bụ n'ụzọ zuru ezu dakọtara na ihe ọ bụla iOS ngwaọrụ nke na-agba na iOS 5, iOS 6, iOS 7, iOS 8 ma ọ bụ iOS 9. Ndị a iOS ngwaọrụ tinyere iPhone 6s (Plus), iPhone 6 (Plus), iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 4, iPhone 5, iPhone 4S, iPhone 3GS, iPod aka 4, iPod aka 5, iPad Obere, The New iPad, iPad 2, iPad Air, wdg
Nzọụkwụ 3. Import iOS photos na kọmputa
Dị ka ị na-ahụ bụ isi window nke Wondershare TunesGo, na ekpe size, e nwere faịlụ ụdị aha dị ka "Photos". Pịa ya ikpughe foto albums na gị iOS ngwaọrụ. Site na ndabara, ha na-Photo Library na igwefoto Roll. Photo Library echekwa photos na ị na synced ka iOS ngwaọrụ site na iTunes. Igwefoto Roll-azọpụta photos na ị na weghaara na ya. Pịa nchekwa ịhụ foto niile na ya. Họrọ chọrọ photos na pịa Export na. Chọta a ebe na kọmputa gị iji zọpụta ndị a iOS photos.
Ọ bụ ya! Ọ na-ewe sekọnd ole na ole nyefee photos site na iOS ngwaọrụ ka na kọmputa. E wezụga na, Wondershare TunesGo-enye gị ohere nyefee music, fim, TV na-egosi, iTunes U, Pọdkastị, wdg si iOS ngwaọrụ kọmputa dị ka mma.
Otú ndabere iPhone ka mpụga ike mbanye